ဖွိုးဖွိုးဝေ – Hlataw.com
ဖွိုးဖွိုးဝေ သနျးကွိုငျ နဲ့ ထှနျးကြျော တို့နတေဲ့တိုကျခနျးတှဲကိုညားခါစ နှဈယောကျရောကျလာတယျ…။သနျးကွိုငျအခနျးနဲ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျဖွဈပွီး ထှနျးကြျော နဲ့ကကပျရပျအခနျးဖွဈသညျ…။ သနျးကွိုငျ သညျလူပြို လူလှတျတဈကောငျကွှကျဖွဈပွီးမိနျးမကိစ်စအတျောရှုပျသညျ…။ ဝငျငှကေောငျးလတေော့တဈခါတရံသူ့အခနျးမှာပဲ ဖာသညျမတှခေျေါချေါပွီးဖာခလြရှေိ့သညျ…။ ထှနျးကြျော ကတော့မိနျးမရှိပွီးကလေး ၂ ယောကျအဖဖွေဈလတေော့ သနျးကွိုငျ လောကျမရှုပျနိုငျ…။ သနျးကွိုငျ သူနဲ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျအခနျးကိုရောကျလာတဲ့လငျမယား ကိုသခြောလလေ့ာနသေညျ…။ ယောကျြားဖွဈသူကကုမ်ပဏီတဈခုမှာအလုပျလုပျပွီးမိနျးမဖွဈသူကမူလတနျးပွကြောငျး ဆရာမတဈဦးဖွဈသညျ…။ အသကျအားဖွငျ့လငျမယားနှဈယောကျစလုံး ၂၃ နှဈ ၂၄ နှဈမြှပငျရှိအုံးမညျ…။ ယောကျြားနာ မညျက အောငျသီဟ ဖွဈပွီးမိနျးမနာမညျက ဖွိုးဖွိုးဝေ ဖွဈသညျ…။ အောငျသီဟ သညျတညျတညျကွညျကွညျနတေတျ ပွီးယောကျြားပီသသလို ဖွိုးဖွိုးဝေ ဟာလညျးရုပျရညျခြောမောလှပတဲ့မိနျးကလေးတဈဦးပငျဖွဈသညျ…။ သနျး ကွိုငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ စတှကေ့တညျးကစိတျဝငျစားသညျ…။
ဖွိုးဖွိုးဝေ သညျဆံပငျရှညျရှညျအရပျမွငျ့မွငျ့နဲ့ဖွူဝငျးတဲ့အသား အရကေိုပိုငျဆိုငျထားပွီးခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားလှပသညျ…။ လုံးဝနျးသောရှရေငျနှဈမှာမှာရငျပွငျကယျြကယျြတှငျမို့မောကျ နပွေီးတငျပါးမှာစှငျ့ထှားပွီးဘေးကိုပွနျ့ကားနသေညျ…။ သေးသှယျသောခါးကွောငျ့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ရဲ့ရငျသားနဲ့တငျပါးအလှက ပို၍ပျေါလှငျစသေညျ…။ ထိုကဲ့သို့လှပတောငျ့တငျးတဲ့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ကိုလိုးခှငျ့ရဖို့ သနျးကွိုငျ နညျးမြိုးစုံစဉျးစား သညျ…။ နှဈပတျလောကျကွာတော့ အောငျသီဟ နဲ့အတူသနျးကွိုငျ ရယျ ထှနျးကြျော ရယျသုံးယောကျသားအထုပျကိုယျ စီကိုငျပွီးရောကျလာသညျ…။ ” မိနျးမရေ…မိနျးမ…” ” လာပွီကိုရေ…ဪ…ဧညျ့သညျတှလေညျးပါလာတာပဲ…လာပါရှငျ့…လာပါ…” ” မိနျးမ…ဒါ…ကိုသနျးကွိုငျ တဲ့ကိုတို့နဲ့မကျြနှငျခငျြးဆိုငျအခနျးမှာနတော…သူက ကိုထှနျးကြျော တဲ့ကိုတို့ခေါငျးရငျးအခနျး မှာနတေယျ…ဒါကကြှနျတေျာ့မိနျးမ ဖွိုးဖွိုးဝေ တဲ့…မင်ျဂလာဆောငျပွီးတာတဈလလောကျပဲရှိသေးတယျ… မိနျးမရေ…ဒီနအေ့ကိုတို့နဲ့မိတျဖွဈဆှဖွေဈဒီနအေ့ရကျသောကျကွမလို့…” ” ရပါတယျကိုရယျ…ဖွိုး…နားလညျပါတယျ…ကိုတို့စားဖို့…ဖွိုး…တဈခုခုသှားစီစဉျလိုကျအုံးမယျနျော…အကိုတို့ခဏနျော ဖွိုး…စားစရာသှားစီစဉျလိုကျဦးမယျ…” ” အားနာစရာကွီးညီမရယျ…အကိုတို့မှာစားစရာပါဝယျလာပါတယျ…”။
ဖွိုးဖွိုးဝေ ထိုငျရာမှမီးဖိုခြောငျဘကျထထှကျသှားတော့နိမျ့တုံမွငျ့တုံဖွဈနတေဲ့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ဖငျကွီးတှကေိုကွညျ့ရငျးလီး တောငျလာသညျ…။ အတှငျးခံပါလို့သာတျောသေးသညျ…။ အတှငျးခံသာမပါရငျ အောငျသီဟ ရိတျမိသှားနိုငျသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ မီးဖိုထဲဝငျသှားပွီးခဏကွာတော့…. ” အကိုတို့ခဏနျောကြှနျတေျာ့မိနျးမကိုနညျးနညျးသှားကူလိုကျဦးမယျ…” ” ရတယျညီလေး…သှား…သှား…အကိုတို့ကိုအားနာမနနေဲ့…” အောငျသီဟ ထထှကျသှားတော့ သနျးကွိုငျ အကငြ်္ီအိပျကပျထဲကစက်ကူနဲ့ထုပျလာတဲ့အိပျဆေးမှုနျ့ကို အောငျသီဟ သောကျမဲ့အရကျခှကျထဲနဲ့ ဖွိုးဖွိုးဝေ အတှကျအခြိုရညျထညျ့ထားတဲ့ခှကျထဲကိုမြှထညျ့လိုကျသညျ…။ ” သနျးကွိုငျ အဲဒါဘာလဲ…” ” အိပျဆေး…” ” ဘာလုပျဖို့လညျး…” ” ဟိုကောငျမလေးကိုလိုးမလို့…” ” သနျးကွိုငျ မငျးပွဿနာတတျမယျနျော…” ” မငျး…အသာနစေမျးပါ…မသိခငျြယောငျဆောငျနေ…ငါပွီးရငျမငျးအလှညျ့လာမယျ…” ” အေးပါကှာ…” ခဏကွာတော့…အောငျသီဟ နဲ့ ဖွိုးဖွိုးဝေ တို့ပနျးကနျလေးတှကေိုငျပွီးရောကျလာကွတယျ…။ ” ဒီကအကိုတို့လညျး ဖွိုး ရှိနလေို့အားမနာပါနဲ့နျော…လှတျလှတျလပျလပျပဲသောကျကွပါ…” ” ကြေးဇူးပါညီမရယျ…ကဲရော့…ညီမအတှကျအခြိုရညျထညျ့ထားတယျ…” ” ဟုတျကဲ့ရှငျ့…ကြေးဇူးတငျပါတယျ…” အောငျသီဟ ရယျ သနျးကွိုငျ ရယျ ထှနျးကြျော ရယျကတော့တဈခှကျပွီးတဈခှကျသောကျနေ၏…။
ဒါပမေဲ့… သနျးကွိုငျ နဲ့ ထှနျးကြျော ကအနညျးငယျသာသောကျပွီး အောငျသီဟ ကိုအမှောကျတိုကျနကွေသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ လညျးခှကျထဲကအခြိုရညျကိုတဈခါတညျးအကုနျသောကျလိုကျတော့…သနျးကွိုငျ ကနောကျတဈ ခှကျထပျထညျ့ပေးသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ လညျးအခြိုရညျလေးသောကျလိုကျအမွညျးလေးနှိုကျစားလိုကျနဲ့ကွာလာတော့…. အိပျဆေးအရှိနျတကျလာပွီးအိပျခငျြလာသညျ…။ အောငျသီဟ လညျးအရကျအရှိနျနဲ့အိပျဆေးအရှိနျရောပွီးစားပှဲပျေါမှောကျ သှားသညျ…။ မကွာပါဘူး…ဖွိုးဖွိုးဝေ လညျးအိပျဆေးအရှိနျတကျလာပွီးဆိုဖာဆကျတီထိုငျခုံပျေါမှီရငျးအိပျပြျောသှား သညျ…။ ” ကဲ…ထှနျးကြျော ရေ…မငျး…ဒီကောငျ့ကိုခဏကွညျ့ထား…ငါ…သူ့ကိုအိပျခနျးထဲမသှားပွီးလိုးလိုကျအုံးမယျ…” သနျးကွိုငျ လညျး ဖွိုးဖွိုးဝေ ခန်ဓာကိုယျကိုပှခြေီ့ပွီးအိပျခနျးထဲချေါသှားသညျ…။ အိပျခနျးထဲရောကျတော့ကုတငျ ပျေါမှာပကျလကျတငျပွီး ဖွိုးဖွိုးဝေ ဘေးကနဝေငျအိပျကာဖကျပွီး Selfie ဆှဲလိုကျသညျ…။ ပွီးတော့ဖုနျးကိုကုတငျဘေး ကစာရေးစားပှဲပျေါတငျပွီး ဗှီဒီယို ရိုကျထားလိုကျသညျ…။ သနျးကွိုငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ အပျေါယံအကငြ်္ီထုပျသီးတှကေိုဖွုတျလိုကျသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ ရငျဘကျဟငျးလငျးပှငျ့ သှားသညျ…။
အနကျရောငျဇာဘျောလီအောကျမှဖွူဝငျးတဲ့ရငျသားစိုငျတှဟောဘျောလီအပွငျဘကျလြှံထှကျနသေညျ…။ သနျးကွိုငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ကြောကုနျးအောကျကိုလကျလြှိုကာဘျောလီခြိပျတှကေိုဖွုတျပွီးဘျောလီကိုခြှတျပဈ လိုကျသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ အပျေါပိုငျးအဝတျဗလာဖွဈသှားသညျ…။ သနျးကွိုငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ရဲ့ဖွူဝငျးတဲ့နို့အုံကို ကွညျ့ပွီးသဘောကနြသေညျ…။ ဖွူဝငျးသောနို့အုံအလယျမှာမနျကညျြးစခေ့နျ့နို့သီးခေါငျးလေးမှာနီညိုရောငျသနျးနေ သညျ…။ မိမိအရမျးလိုးခငျြနသေညျ့မိနျးမတဈယောကျရဲ့နို့ကိုလကျတှကေို့ငျခှငျ့စို့ခှငျ့ရနလေပွေီ..။ ဖွိုးဖွိုးဝေ ရဲ့ဘယျဘကျနို့ကိုဆုပျနယျရငျးညာဘကျနို့ကိုကုနျးစို့လိုကျသညျ…။ ” ပွတျ…ပွတျ….” ” အငျ့…ဟငျး…” ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျမှညညျးသံသဲ့သဲ့ထှကျလာသညျ…။ အိပျယာကနိုးသှားခွငျးတော့မဟုတျ…အိမျမကျယောငျယောငျဖွဈ နသေညျ…။ သနျးကွိုငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ နို့ကိုစို့နရေငျးပါးစပျထဲတံတှေးမြားလာသညျ့အတှကျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျကို ပါးစပျခငျြးတလေို့ကျတော့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျလေးဟလာသညျ…။ သနျးကွိုငျ လညျး ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျထဲတံ တှေးမြားထှေးခလြိုကျသညျ…။ ပွီးတော့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျကိုပါးစပျခငျြးတပွေီ့းအငမျးမရနမျးလတေော့သညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ ဆီမှညညျးသံသဲ့သဲ့ထှကျလာပွီးတဈခကျတဈခကျြခါးလေးကော့ကော့လာသညျ…။
သနျးကွိုငျ လညျးပါးစပျခွငျးနမျးရငျး ဖွိုးဖွိုးဝေ ရဲ့ထမိနျစကိုဆှဲဖွညျပွီးထမိနျအောကျကိုလကျလြှိုသှငျးလိုကျသညျ…။ ပငျတီအပျေါ မှစောကျဖုတျနရောကိုစမျးကွညျ့လိုကျတော့အရညျတှစေိုရှဲနသေညျ…။ သနျးကွိုငျး လညျးစောကျစိနရောကို စမျးပွီးလကျခလယျနဲ့ဖိပှတျလိုကျတော့… ” အား…ကိုရယျ….အား…ယားတယျ…အ…” ဖွိုးဖွိုးဝေ အသံကွားတော့ သနျးကွိုငျ စိတျတှပေိုပွီးထလာသညျ…။ ကုတငျပျေါကဆငျးပွီး ဖွိုးဖွိုးဝေ ခန်ဓာကိုယျကိုကုတငျပျေါကနျ့လနျ့ဖွတျထားပွီးထမိနျနဲ့အနီရောငျပငျတီကိုဆှဲခြှတျလိုကျသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ ခန်ဓာကိုယျ မှာအဝတျဗလာဖွဈသှားသညျ…။ သနျးကွိုငျ လညျးသူ့ရှကေ့သူအရမျးလိုးခငျြနတေဲ့ဖွူဖွူဖှေးဖှေးရဆေေး ငါးကွီးကိုလိုးရတော့မှာမလို့လီးကအပွတျကိုမာတောငျနသေညျ…။ စောကျဖုတျမှေးမြားရှငျးထားသညျ့အတှကျကွောငျ့ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးကွီးကအထငျးသားတှမွေ့ငျနရေသညျ…။ သနျးကွိုငျ လညျး ဖွိုးဖွိုးဝေ ပေါငျကိုဆှဲ ကားကာစောကျဖုတျကိုဖွဲကွညျ့လိုကျတော့…စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားတှမှောပွဲလနျမနသေေးပဲအနညျးငယျနီညိုရောငျး သနျးနသေညျ….။ စောကျဖုတျအတှငျးသားတှကေတော့…ဖရဲသီးစိပျလိုရဲမှညျ့နပွေီး…စောကျစိမှာပွူးထှကျနသေညျ…။
သနျးကွိုငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကိုကိုငျပွီးကုတငျအဖြားထိဖငျရောကျလာအောငျဆှဲလိုကျသညျ…။ ပွီးတော့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကိုပျေါထောငျပွီးနရောဝငျယူလိုကျသညျ…။ ပွီးတော့သူ့လီးကွီးကို ဖွိုးဖွိုးဝေ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးမှာတပွေီ့းဖွညျးဖွညျးခငျြးထိုးထညျ့နသေညျ…။ အောငျသီဟ လီးမှာ သနျးကွိုငျ လီးလောကျမတုတျတာကတဈကွောငျး…အလိုးခံဖူးသညျ့အရအေတှကျနညျးသညျကတဈကွောငျးကွောငျ့ ဖွိုးဖွိုးဝေ စောကျဖုတျမှာစီးပိုငျကွပျထုပျနသေညျ….။ ” အ…အာ့…ကိုရယျ…ကို့ဟာကွီးကဒီနကွေီ့းလိုကျတာအရမျးပဲ…ဖွိုး…ကွိုကျတယျ…အ…အ…” ” အ့…ကိုရယျ…အရမျးကောငျးတယျ….အ…အ…အီး…ရှီး….” သနျးကွိုငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ကိုကွာကွာမလိုးနိုငျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျမှထှကျလာသညျ့စကားကွောငျ့သူ့စိတျတှေ အရမျးထလာပွီးခဏအတှငျးမှာ ” ပွီး…” ခငျြလာသညျ…။ ” အ့…အ့…ကိုရယျ…အ့…ကောငျးတယျစောငျ့…စောငျ့…အ့…အီး…အိုး..ရှီး…” ” ဗွှတျ…ဗွှတျ…ဘှတျ….ဗဈြ…ဗဈြ….ဗဈြ…” ” အ့…အ့…အား…” သနျးကွိုငျ လညျး ” ပွီး…” ခငျြနတေဲ့စိတျကိုထိနျးထားတဲ့ကွားကမနနေိုငျပဲ ဖွိုးဖွိုးဝေ စောကျဖုတျထဲကို သုတျရညျတှဒေလဟောပနျးထညျ့လိုကျသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ လညျးပူနှေးနှေးခံစားရပွီးငွိမျကသြှားသညျ…။
သနျးကွိုငျ လီးမှာတဈခြီ ” ပွီး…” သျောလညျးပြော့ခှမေသှားသေးပဲမာတောငျနသေညျ…။ နောကျတဈခြီထပျဆှဲဖို့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးကိုကုတငျပျေါမှောကျလြှကျထားပွီးဗိုကျအောကျကိုခေါငျးအုံးတှခေုလိုကျသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ ပုံစံမှာကုတငျပျေါမှာခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးရှိပွီးခွထေောကျနှဈခြောငျးမှာအောကျကိုတှဲလောငျးကနြသေညျ့ အတှကျကုနျးနသေလိုဖွဈနသေညျ…။ သနျးကွိုငျ လညျး ဖွိုးဖွိုးဝေ ပေါငျနှဈဖကျဖွဲကားပွီးနောကျကိုပွူ ထှကျနတေဲ့စောကျဖုတျဝကိုတကေ့ာလိုးလိုကျပွနျသညျ…။ ခဏကွာတော့ ထှနျးကြျော အိပျခနျးထဲဝငျလာပွီး… ” ဟှောငျ့…သနျးကွိုငျ…မပွီးသေးဘူးလား…” ” တဈခြီပွီးပွီဟ….ဒါဒုတိယအခြီ…ဒါပွီးမငျးလိုးရမှာပါကှ…” သနျးကွိုငျ နဲ့ ထှနျးကြျော တို့နှဈယောကျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ကိုတဈယောကျနှဈခြီဆီလိုးအပွီးနောကျနတှေ့လေညျးဖနျ လို့ရအောငျပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ဓာတျပုံရိုကျယူပွီး ဖွိုးဖွိုးဝေ ကိုအဝတျအစားတှပွေနျဝတျပေးပွီးဧညျ့ခနျးထဲကဆိုဖာဆကျတီခုံ ပျေါမှာပုံမပကျြပွနျထားပွီးအိမျပွနျသှားကွတယျ…။ မနကျ ၇ နာရီထိုးလောကျမှာ ဖွိုးဖွိုးဝေ နိုးလာသညျ…။ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့တော့ယောကျြားဖွဈသူကလညျးစားပှဲပျေါ မှောကျအိပျနသေညျ…။ ညကအကွောငျးတှပွေနျစဉျးစားကွညျ့တော့ဘာမှစဉျးစားမရ…။
ညကအိမျမကျမကျတဲ့ကိစ်စတဈခု သာမကျြစိထဲပွနျမွငျယောငျနမေိတယျ…။ ညကအိမျမကျထဲမှာသူမကိုလိုးပေးနတော ” ကို ” မဟုတျပဲ ကိုသနျးကွိုငျ ကွီး ပါလားဆိုပွီးရှကျပွုံးပွုံးမိလရေဲ့….။ အိမျမကျမဟုတျသောလကျတှဘေ့ဝ ဖွိုးဖွိုးဝေ ကြောငျးဆငျးတော့အိမျကို ၃:၃၀ လောကျပွနျရောကျလာတယျ…။ အခနျးတံခါးသော့ဖှငျ့နတေုနျးသူမပွနျအလာ ကိုစောငျ့နတေဲ့ သနျးကွိုငျ လညျးသူ့အခနျးထဲကထှကျလာတယျ…။ ” မင်ျဂလာပါဆရာမလေး…” ” ဟုတျကဲ့…မင်ျဂလာပါရှငျ့…မနညေ့ကအကိုတို့ပွနျသှားတာတောငျ…ဖွိုး…မသိလိုကျဘူးအဲဒီအတှကျ…ဖွိုး…တောငျးပနျ ပါတယျနျော…” ” ရပါတယျ…အျော..ဒါနဲ့…ညီမ..ဒီကောငျမလေးကိုသိလား…” ဆိုပွီး သနျးကွိုငျ ဖုနျးထဲကပုံကိုပွလိုကျသညျ…။ ပုံမှာမိနျးကလေးတဈယောကျကကုတငျစောငျးတှငျကြောမှီ ထားပွီးအဝတျဗလာဖွငျ့ယောကျြားတဈယောကျလီးကိုပါးစပျထဲထညျ့ထားသညျ…။ သနျးကွိုငျ ကလညျးတဈ ပုံပွီးတဈပုံပွလာတော့မှထိုမိနျးကလေးမှာမိမိဖွဈနမှေနျးသိရပွီး ဖွိုးဖွိုးဝေ ခေါငျးတဈခုလုံးခြာခြာလညျသှားသညျ…။ မနညေ့ကအိမျမကျလို့ထငျထားခဲ့တဲ့အဖွဈအပကျြကအမှနျတကယျဖွဈနသေညျ…။ နောကျပွီးတော့ သနျးကွိုငျ တဈယောကျတညျးမဟုတျ ထှနျးကြျော လိုးတာပါခံလိုကျရသေးသညျ…။
ဒီပုံနဲ့ဗှီဒီယိုဖိုငျကိုလိုငျးပျေါတငျရမလားလို့…” ” မ…မလုပျပါနဲ့ရှငျ…ဖကျြပေးပါနျော…ဖွိုး…တောငျးပနျပါတယျ….” ” ဖကျြပေးစခေငျြရငျ…အကို့ဆန်ဒတှကေိုဖွညျ့စညျးပေးရမယျ…” ” ရှငျ…” ” ဘယျလိုလဲ…သဘောတူလား…” ” မလုပျပါနဲ့အကိုရယျ…ဖွိုး….ကို့…အပျေါမှာသစ်စာမဖောကျပါရစနေဲ့…” ” ကွာပါတယျ…အခုပဲလိုငျးပျေါတငျလိုကျတော့မယျ…” ” မ…မတငျပါနဲ့…ဖွိုး…လကျခံပါတယျ…” ” Ok ဒါဆိုတံခါးဖှငျ့လိုကျဧညျ့ခနျးထဲမှာပဲလိုးမယျ…” ပုံနဲ့ဗှီဒီယိုဖိုငျကိုလိုငျးပျေါတော့ ဖွိုးဖွိုးဝေ အနနေဲ့မတငျစလေို…။ ပုံနဲ့ဗှီဒီယိုဖိုငျသာ အောငျသီဟ တှသှေ့ားရငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ကိုဘယျနညျးနဲ့မှခှငျ့လှတျမညျမဟုတျ…။ နောကျပွီးနှဈဖကျအသိုငျးအဝိုငျးလညျးအရှကျရမှာကို ဖွိုးဖွိုးဝေ မလိုလားသော ကွောငျ့ သနျးကွိုငျ ကိုလကျခံလိုကျသညျ…။ စိတျထဲမှာတော့ သနျးကွိုငျ ကိုမကမြေနပျဖွဈနသေညျ။ သနျးကွိုငျ သညျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ကိုဖကျထားပွီးမကျြရညျစိုနတေဲ့ပါးလေးကိုပှတျသပျကာနှုတျခမျးဖူးဖူးလေးကိုလြှာ ဖြားနဲ့ကလိလိုကျသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ ရငျတှတေဒိနျးဒိနျးခုနျနသေညျ…။ သနျးကွိုငျ ပွုသမြှနုရတော့မညျ…။ ” ဖတျ…” ” ကောငျမဘာလုပျနတောလဲ…ငါ့ကိုပွနျနမျးလေ…” သနျးကွိုငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးကိုဖတျခနဲရိုကျပွီးသူ့ပါးစပျကိုပွနျနမျးခိုငျးသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ နှုတျခမျးအစုံမပှငျ့တပှငျ့ လေးဟလာတော့…သနျးကွိုငျ အငမျးမရနမျးလတေော့သညျ…။
” အှငျး….အှငျး….အှငျ့….” ဖွိုးဖွိုးဝေ သနျးကွိုငျ ကိုတငျးတငျးဖကျထားသညျ…။ အသိစိတျက သနျးကွိုငျ ကိုမုနျးနပေမေဲ့မသိ စိတျထဲမှာတော့ကနြေပျသလိုလိုဖွဈလာပွီး…သနျးကွိုငျ ကိုပွနျနမျးမိလသေညျ…။ သနျးကွိုငျ လညျး ဖွိုးဖွိုးဝေ ရဲ့အဖွူရောငျရငျဖုံးအကငြ်္ီကိုစောငျ့ဆှဲလိုကျတော့…နှိပျစိတှပွေုတျပွီးရငျဘကျဟောငျးလောငျးပှငျ့သှားသညျ.။ သနျးကွိုငျ လညျးအသားရောငျဘျောလီအကငြ်္ီအောကျကနလေကျနဲ့နှိုကျကာ ဖွိုးဖွိုးဝေ ရဲ့စူဖွိုးမို့မောကျနေ တဲ့ဘယျဘကျနို့အုံကိုနှိပျခနြေသေညျ…။ ” အှငျး…အှငျး…အှငျး…” ဖွိုးဖွိုးဝေ တဈယောကျ သနျးကွိုငျ ရဲ့ကာမကှနျယကျမှာမရုနျးနိုငျအောငျပိတျမိနသေညျ…။ စောကျဖုတျတဈခု လုံးအရညျတှစေိမျ့ထှကျကာစိုရှဲနပွေီးယားကြိကြိဖွဈနသေညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ အလိုးခံခငျြနပွေီဆိုတာ သနျးကွိုငျ သိသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ မကျြနှာမှာကာမသှေးနိုးကွှလာပွီးနီရဲနသေညျ…။ သနျးကွိုငျ လညျးပို၍သခြောအောငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ဝထေမိနျအစိမျးကိုခြှတျပွီးပငျတီကိုစမျးကွညျ့တော့အရညျတှစေိုရှဲနသေညျ…။ ” ကောငျမအလိုးခံခငျြနပွေီမလား…” “…….” ဖွိုးဖွိုးဝေ ပွနျမဖွေ….အဖွပေေးရမှာလညျးပါးစပျကပွောမထှကျ…။ ” မမေးပဲကမြကိုတကျလိုးလိုကျပါတော့လား…” လို့စိတျထဲမှပွောနမေိတယျ…။ ” ဖွောငျး…” ” အား…” ” ကောငျမ…ငါမေးနတောမဖွဘေူး…အလိုးခံခငျြပွီလား…” ” ဟုတျ…” ” ဖွောငျး…” ” အ့….” ” ဘာဟုတျလညျး…ကမြကိုလိုးပေးပါတော့လို့ပွော…” ။
” ဟုတျ…ကမြကိုလိုးပေးပါတော့…ကမြအရမျးခံခငျြနပွေီ…” ဖွိုးဖွိုးဝေ အသားအနာမခံလိုတော့၍မပွောဝံ့ပမေဲ့အရဲစှနျ့ကာပွောလိုကျသညျ…။ ” ကောငျမ…တျောတျောရှနေ…လာ..ငါ့လီးကိုအရငျစုပျပေး…ငါ့လီးတောငျလာမှလိုးပေးမယျ…” ဖွိုးဖွိုးဝေ စိတျညဈသှားသညျ…။ တဈခါမှမလုပျဖူးတဲ့အလုပျကိုလုပျခိုငျးနသေညျ…။ ကို နဲ့လိုးတုနျးကတောငျ ကိုလီးကို စုပျမပေးခဲ့ဘူး…။ အခုလိုသူစိမျးယောကျြားတဈယောကျရဲ့လီးကိုမဖွဈမနစေုပျပေးရတော့မယျဆိုတော့ရှကျနမေိသညျ…။ ” ကောငျမ…ဘာလဲအသားနာခငျြတာလား…ငါ…ပါးကိုဖွတျရိုကျလိုကျရ….” ဖွိုးဖွိုးဝေ ကွောကျကွောကျနဲ့ သနျးကွိုငျ ရှတှေ့ငျဒူးထောကျထိုငျလိုကျသညျ…။ သနျးကွိုငျ ပုဆိုး ကိုခြှတျခလြိုကျတော့…ထောငျမတျနတေဲ့လီးကွီးကဘှားခနဲပျေါလာသညျ…။ လီးကွီးမှာတုတျတုတျရှညျရှညျနဲ့မဲပွောငျ ကာအကွောဖွိုငျးဖွိုငျးထနသေညျ…။ မကွာခငျအခြိနျမှာဒီလီးကွီးနဲ့အလိုးခံရတော့မယျလို့တှေးရငျးရငျထဲလှိုကျဖိုလာ သညျ…။ သနျးကွိုငျ သူ့လီးကွီးကိုကိုငျပွီး ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျတှငျလာတသေ့ညျ…။ ” ကောငျမ…ဘာစဉျးစားနတောလဲ…ငါ့လီးကိုစုပျပေးစမျး…” ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျဟလေးလိုကျတော့ သနျးကွိုငျ သူ့လီးကွီးကိုကိုငျပွီးထိုးထညျ့သညျ…။
ပါးစပျထဲလီးတဈဝကျ လောကျဝငျလာတော့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ခေါငျးကဆံအုပျကိုဖွုတျပွီးဆံပငျတှကေိုအပျေါစုစညျးကာစောကျဖုတျကိုလိုးသလိုပါးစပျ ကိုလိုးနသေညျ…။ ” အှငျ့…အှငျ့…အှငျ့…”” အိုး…ကောငျးလိုကျတာကှာ…ကောငျမ…လီးစုပျပေးတာကြှမျးသားပဲ…” အခြိနျအတျောကွာအောငျလီးစုပျခိုငျးပွီးနောကျ သနျးကွိုငျ က ဖွိုးဖွိုးဝေ ကိုဆိုဖာဆကျတီထိုငျခုံပျေါတှငျဒူး ထောကျကုနျးခိုငျးသညျ…။ ” ကောငျမ…ကုနျးပေးစမျး…” ဖွိုးဖွိုးဝေ သနျးကွိုငျ ပွောသလိုကုနျးပေးလိုကျသညျ…။ ကားကိုကော့ကာကုနျးပေးရသညျ့အတှကျစောကျဖုတျ မှာပွူးထှကျနသေညျ…။ သနျးကွိုငျ လညျးဘယျဘကျလကျကို ဖွိုးဖွိုးဝေ ခါးကိုကိုငျပွီးညာဘကျလကျနဲ့သူ့လီး ကွီးကိုဆုပျကိုငျကာစောကျဖုတျဝကိုတပွေီ့းလီးတဈခြောငျးလုံးဝငျသညျအထိဖွညျးဖွညျးခငျြးထိုးသှငျးလိုကျသညျ…။ တုတျတုတျရှညျရှညျလီးကွီးနဲ့အထိုးခံရလို့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ညညျးသံသဲ့သဲ့ထှကျလာသညျ…။ ” ဗွဈ…ဗွဈ…ဗွဈ….ဗွှတျ…” ” အ့…အမေ့…အ့…အ့…အား…” ” ကောငျမဘယျလိုနလေဲ…ကွိုကျလား…” ” ကွိုကျတယျ…”ကလငျ…လငျ…လငျ….စားပှဲပျေါမှဖုနျးဝငျလာသညျ…။ သနျးကွိုငျ လညျးဘယျ့သူ့ဆီကဖုနျးလညျးဆိုတာကွညျ့လိုကျတော့ အောငျသီဟ ဆီကဖုနျးဖွဈနသေညျ…။
” ကောငျမ…နငျ့ယောကျြားဆီကဖုနျးလာတယျကိုငျလိုကျ…” ဖွိုးဖွိုးဝေ ဖုနျးကိုကောကျကိုငျလိုကျသညျနှငျ့ သနျးကွိုငျ နောကျကနအေသာလိုးနသေညျ…။ ” ဟလို…” ” ဖွိုး…အိမျပွနျရောကျပွီလား…” ” ဟုတျ…ရောကျပွီ…ကို…” ” ကို…အခုအလုပျကိစ်စနဲ့နယျဘကျသှားနတော…ညအိမျပွနျမအိပျဖွဈဘူး…ဖွိုး…တဈယောကျတညျးအိပျရဲလား…” ” ဖွိုး…အိပျရဲပါတယျ…အ့…” ” ဖွိုး…မကွောကျနဲ့နျော…ကို….ကိုသနျးကွိုငျ တို့ ကိုထှနျးကြျော တို့ဆီကဖုနျးဆကျပွီးပွောလိုကျပါ့မယျ…” ” အငျး..ပါ…ကို…ဒါဆို…ဖွိုး…ဖုနျးခလြိုကျတော့မယျ…အှငျ့…” ” ဖွိုး…ဘာဖွဈနတောလဲ…ဖြားနတောလား…” ” ဖွိုး…မဖြားပါဘူး…ဒီနေ့…အ…ပငျပနျးနလေို့…အ့…ဒါဆိုဒါပဲနျော…” ” Ok…ဖွိုး…ဖွိုး…ကို…အရမျးခဈြတယျ…” ဖွိုးဖွိုးဝေ မှာယောကျြားနဲ့ဖုနျးပွောရငျးအလိုးခံရသညျမို့တအငျ့အငျ့ဖွဈနသေညျ…။ ဖုနျးပွောရငျး သနျးကွိုငျ လိုးတဲ့ဆီအာရုံရောကျနပေမေဲ့ယောကျြားသိမှာကွောကျ၍ကွိတျခံနရေသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ ဖုနျးခသြှားတော့ သနျးကွိုငျ လညျး ဖွိုးဖွိုးဝေ ကိုနှားသိုးကွိုးပကျြလိုးပါတော့သညျ…။ ” အား…အား..အီး….ရှီး…” ” ကောငျမ…ကောငျးလား…” ” အား…အရမျးကောငျးတယျ…အာ…အား…” ကလငျ…လငျ…လငျ… ” ဟလို…” ” ကိုသနျးကွိုငျ ကြှနျတျော အောငျသီဟ ပါ…” ” အေး…ညီလေးပွော…” ” ကြှနျတျောအခုအလုပျကိစ်စရှိလို့နယျဘကျသှားနတော…ဒီညပွနျမလာဖွဈလို့အိမျကိုဂရုစိုကျပေးပါဦး…”။
” အေးအေး..ညီလေး…အကိုဂရုစိုကျလိုကျပါ့မယျ…” ” ကြေးဇူးတငျပါတယျဗြာ…ပွနျလာမှဘီယာတိုကျမယျ…” ” ရပါတယျညီလေးရာ…” ” ဒါနဲ့ခငျဗြားအခုဘာလုပျနတောလဲဗြ…ခုနမိနျးကလေးတဈယောကျအသံကွားမိသလားလို့…” ” ဟုတျတယျ..ညီလေးရာ…ဒီနစေိ့တျထနလေို့ဖားသညျမတဈယောကျချေါပွီးဆှဲနတော…” ” ဟား…ဟား…ခငျဗြားကတော့လုပျပွီ….” ” ဘာလဲမယုံဘူးလား…မယုံရငျအသံနားထောငျကွညျ့….” ဆိုပွီးဖုနျးကို ဖွိုးဖွိုးဝေ မကျြနှာနားကပျပေးလိုကျသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ လနျ့သှားသညျ…။ အသံမထှကျအောငျပါးစပျပိတျ ထားပမေဲ့…သနျးကွိုငျ စောငျ့ခကျြကပွငျးတော့ညညျးသံသဲ့သဲ့ထှကျလာသညျ….။” အှငျ့….အှငျ့…” ” ကောငျမ…ပွောစမျး…ငါလိုးတာကွိုကျလား…” ” …….. ” ဖွိုးဖွိုးဝေ ပွနျမဖွေ…တော့နားနားကပျပွီးတိုးတိုးလေးပွောလိုကျသညျ…။ ” ကောငျမ…မငျးယောကျြားမသိစခေငျြရငျငါမေးတာဖွေ…” ” အား…ကောငျးတယျ…အား…အီး…ရှီး…” ” ကောငျမ…ငါ့လီးကိုကွိုကျလား…” ” အား…ကွိုကျတယျ…အ့…အရမျးကွိုကျတယျ…” ဖွိုးဖွိုးဝေ ယောကျြားဖွဈသူမသိအောငျ သနျးကွိုငျ မေးသမြှကိုအသံပွောငျးကာဖွပေေးလိုကျသညျ…။
” ရပါပွီဗြာ…ကဲ…ကိုသနျးကွိုငျ…ကြှနျတျောစိတျခမြယျနျော…ကိုထှနျးကြျော ကိုလညျးပွောလိုကျပါဦး….” ” Ok…ညီလေး…” ခဏကွာတော့…သနျးကွိုငျ စောငျ့ခကျြတှကေမွနျဆနျပွီးပွငျးထနျလာသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ လညျးကောငျးလှနျး ၍ခေါငျးကိုဘယျညာယမျးနရေသညျ…။ ” အငျး…အငျး…အငျး…အား…ရှီး…ငါလိုးမစောကျဖုတျလိုးလို့ကောငျးလိုကျတာ…ကွပျနတောပဲ…” အား…အမေ့…အား…အီး…ရှီး….” သနျးကွိုငျ လီးထိပျမှသုတျရညျမြားဒလဟောပနျးထှကျလာပွီး ဖွိုးဖွိုးဝေ စောကျဖုတျထဲစီးဝငျသှားသညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ လညျးပူခနဲခံစားရပွီးတဈကိုယျလုံးမှာရှိတဲ့အကွောတှနေိုးကွှလာပွီးမောပနျးနှမျးနယျနသေညျ…။ သနျးကွိုငျ လီးကိုဆှဲထုတျလိုကျတော့ ဖွိုးဖွိုးဝေ စောကျဖုတျထဲမှသုတျရညျမြားလြှံထှကျလာသညျ….။ နှဈယောကျသား ခဏနားပွီးနောကျ… ” ဟလို…” ” ဟှောငျ့…ထှနျးကြျော…မငျးအခုဘယျမှာလဲ…” ” အိမျမှာ…ဘာလို့လဲ…” ” မငျး…အခုဘာလုပျနလေဲ…” ” အိမျစောငျ့နတော…မိနျးမကရှာမှာရှိတဲ့သူ့ဒျေါကွီးနမေကောငျးလို့ကလေးတှပေါချေါပွီးရှာပွနျသှားတယျ…ဒါနဲ့.. မငျးကအခုဘယျမှာလဲ…” ” မနညေ့ကမဟသေီလေးအိမျမှာ…” ” ဘာလုပျနတောလဲ…” ” မဟသေီလေးကိုလိုးနတော…” ” တကယျကွီးလား…” ။
” တကယျပေါ့ကှ…အခုတောငျတဈခြီပွီးသှားပွီ…ဟဲ…ဟဲ…” ” ဟှောငျ့…မငျး…ပွဿနာတကျမယျနျော..သူ့ယောကျြားပွနျလာတော့မှာ…” ” သူ့ယောကျြား…ဒီနပွေ့နျမလာဘူးကှ…အဲဒါကွောငျ့မငျးကိုဖုနျးဆကျချေါတာ…သူ့အခနျးလာခဲ့လိုကျ…” ” အေး…အေး…အခုလာပွီ…” ” ကိုသနျးကွိုငျ…ရှငျဘာလို့…ကိုထှနျးကြျော ကိုချေါလိုကျတာလဲ…” ” ကောငျမ…မငျးကိုလိုးခိုငျးမလို့ချေါလိုကျတာ…မငျးမကွားဘူးလား…လာစမျး…ငါ့လီးကိုပွနျစုပျပေးဦး…” ဖွိုးဖွိုးဝေ ကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့နဲ့ ဆိုဖာဆကျတီခုံပျေါမှာပေါငျကားထိုငျနတေဲ့ သနျးကွိုငျ ပေါငျကွားဝငျ ထိုငျကာလီးစုပျပေးလိုကျသညျ…။” အား…ကောငျးလိုကျတာကှာ…စုပျ…စုပျ…လြှာနဲ့လညျးလြှကျပေးဦး…” ” ကြီ….ဂြောကျ…” ဖွိုးဖွိုးဝေ သနျးကွိုငျ လီးကိုစုပျပေးနတေုနျး ထှနျးကြျော ရောကျလာသညျ….။ ” ဟာ…သနျးကွိုငျ…ပိုငျလှခြီလား…” ” အေးကှာ…ပိုကျဆံပေးလိုးရတဲ့ဖာသညျမတောငျသူလောကျခိုငျးမရဘူး…မငျးလညျးငါ့ကိုဘီယာတိုကျရမှာနျော…” ” တိုကျရမှာပေါ့ကှ…ဟဲ…ဟဲ…” ” ကောငျမ…ထစမျး…ဒီပျေါမှာခေါငျးအုံးပွီးပကျလကျလနျပေးစမျး…” ဖွိုးဖွိုးဝေ သနျးကွိုငျ ပွောသလိုဆိုဖာဆကျတီခုံရဲ့လကျတနျးပျေါတှငျခေါငျးမှီကာပကျလကျလှနျပွီးဒူးထောငျ ပေါငျကားပေးလိုကျသညျ…။ သနျးကွိုငျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ပေါငျကွားထဲဝငျပွီးစောကျဖုတျအကျကှဲကွောငျးကိုသူ့လီး ကွီးဖွငျ့ပှတျသပျနသေညျ…။
ထှနျးကြျော လညျးအဝတျအားတှခြှေတျပွီး ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျထဲကိုသူ့လီးကွီးထိုးထညျ့လိုကျ သညျ…။ ပါးစပျထဲလီးတဈခြောငျးလုံးဝငျသှားသညျနှငျ့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ပါးစပျကိုစောကျဖုတျလိုးသလိုလိုးလတေော့သညျ…။ ဖွိုးဖွိုးဝေ သညျတဈခြိနျတညျးမှာစောကျဖုတျရောပါးစပျပါအလိုးခံနရေသညျ…။ ” အှငျ့…အှငျ့….အှငျး…ပွှတျ….ပွှတျ…” ” ကောငျးလိုကျတဲ့စောကျဖုတျကှာ…စီးပိုငျနတောပဲ…ဟဲ…ဟဲ…ဟဲ…” ” ပါးစပျကလညျးကောငျးပါတယျကှ…ဒီကောငျမပါးစပျပေါကျနဲ့ငါ့လီးနဲ့ကှကျတိပဲ…ဟား…ဟား…” ဖွိုးဖွိုးဝေ မှာသောကွာနညေ့နကြေောငျးဆငျးလို့တိုကျခနျးပွနျရောကျကတညျးကအလိုးခံနရေတာစနနေမေ့နကျ ၁၀:၀၀ နာရီလောကျမှ သနျးကွိုငျ နဲ့ ထှနျးကြျော တို့ပွနျသှားကွသညျ…။ သနျးကွိုငျ နဲ့ ထှနျးကြျော တို့နှဈ ယောကျ ဖွိုးဖွိုးဝေ ကိုနရောအမြိုးမြိုးမှာပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့လိုးထားသောကွောငျ့ ဖွိုးဖွိုးဝေ ပငျပနျးနှမျးနယျနသေညျ…။ စောကျဖုတျအတှငျးသားတှစေပျပူစပျလောငျဖွဈနရေုံသာမကဖငျပါအလိုးခံထားရသညျ…။ ပထမဦးဆုံးအကွိမျဖငျလိုး ခံရသညျမို့ဖငျပေါကျထဲမှအောငျ့သလိုလိုခံစားနရေသေးသညျ…။ ကို ပွနျလာရငျသိသှားမှာကွောကျလို့တဈခနျးလုံးသနျ့ ရှငျးရေးလုပျပွီးမှရခြေိုးလိုကျသညျ… အားလုံးပွီးသှားတော့ကုတငျပျေါတှငျအိပျပြျောသှားသညျ……… ပွီးပါ
ဖြိုးဖြိုးဝေ သန်းကြိုင် နဲ့ ထွန်းကျော် တို့နေတဲ့တိုက်ခန်းတွဲကိုညားခါစ နှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်…။သန်းကြိုင်အခန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်ပြီး ထွန်းကျော် နဲ့ကကပ်ရပ်အခန်းဖြစ်သည်…။ သန်းကြိုင် သည်လူပျို လူလွတ်တစ်ကောင်ကြွက်ဖြစ်ပြီးမိန်းမကိစ္စအတော်ရှုပ်သည်…။ ၀င်ငွေကောင်းလေတော့တစ်ခါတရံသူ့အခန်းမှာပဲ ဖာသည်မတွေခေါ်ခေါ်ပြီးဖာချလေ့ရှိသည်…။ ထွန်းကျော် ကတော့မိန်းမရှိပြီးကလေး ၂ ယောက်အဖေဖြစ်လေတော့ သန်းကြိုင် လောက်မရှုပ်နိုင်…။ သန်းကြိုင် သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းကိုရောက်လာတဲ့လင်မယား ကိုသေချာလေ့လာနေသည်…။ ယောက်ျားဖြစ်သူကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပြီးမိန်းမဖြစ်သူကမူလတန်းပြကျောင်း ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သည်…။ အသက်အားဖြင့်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး ၂၃ နှစ် ၂၄ နှစ်မျှပင်ရှိအုံးမည်…။ ယောက်ျားနာ မည်က အောင်သီဟ ဖြစ်ပြီးမိန်းမနာမည်က ဖြိုးဖြိုးဝေ ဖြစ်သည်…။ အောင်သီဟ သည်တည်တည်ကြည်ကြည်နေတတ် ပြီးယောက်ျားပီသသလို ဖြိုးဖြိုးဝေ ဟာလည်းရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်…။ သန်း ကြိုင် ဖြိုးဖြိုးဝေ စတွေ့ကတည်းကစိတ်ဝင်စားသည်…။
ဖြိုးဖြိုးဝေ သည်ဆံပင်ရှည်ရှည်အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့ဖြူဝင်းတဲ့အသား အရေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှပသည်…။ လုံးဝန်းသောရွှေရင်နှစ်မွှာမှာရင်ပြင်ကျယ်ကျယ်တွင်မို့မောက် နေပြီးတင်ပါးမှာစွင့်ထွားပြီးဘေးကိုပြန့်ကားနေသည်…။ သေးသွယ်သောခါးကြောင့် ဖြိုးဖြိုးဝေ ရဲ့ရင်သားနဲ့တင်ပါးအလှက ပို၍ပေါ်လွင်စေသည်…။ ထိုကဲ့သို့လှပတောင့်တင်းတဲ့ ဖြိုးဖြိုးဝေ ကိုလိုးခွင့်ရဖို့ သန်းကြိုင် နည်းမျိုးစုံစဉ်းစား သည်…။ နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ အောင်သီဟ နဲ့အတူသန်းကြိုင် ရယ် ထွန်းကျော် ရယ်သုံးယောက်သားအထုပ်ကိုယ် စီကိုင်ပြီးရောက်လာသည်…။ ” မိန်းမရေ…မိန်းမ…” ” လာပြီကိုရေ…ဪ…ဧည့်သည်တွေလည်းပါလာတာပဲ…လာပါရှင့်…လာပါ…” ” မိန်းမ…ဒါ…ကိုသန်းကြိုင် တဲ့ကိုတို့နဲ့မျက်နှင်ချင်းဆိုင်အခန်းမှာနေတာ…သူက ကိုထွန်းကျော် တဲ့ကိုတို့ခေါင်းရင်းအခန်း မှာနေတယ်…ဒါကကျွန်တော့်မိန်းမ ဖြိုးဖြိုးဝေ တဲ့…မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာတစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ်… မိန်းမရေ…ဒီနေ့အကိုတို့နဲ့မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ဒီနေ့အရက်သောက်ကြမလို့…” ” ရပါတယ်ကိုရယ်…ဖြိုး…နားလည်ပါတယ်…ကိုတို့စားဖို့…ဖြိုး…တစ်ခုခုသွားစီစဉ်လိုက်အုံးမယ်နော်…အကိုတို့ခဏနော် ဖြိုး…စားစရာသွားစီစဉ်လိုက်ဦးမယ်…” ” အားနာစရာကြီးညီမရယ်…အကိုတို့မှာစားစရာပါဝယ်လာပါတယ်…”။
ဖြိုးဖြိုးဝေ ထိုင်ရာမှမီးဖိုချောင်ဘက်ထထွက်သွားတော့နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေတဲ့ ဖြိုးဖြိုးဝေ ဖင်ကြီးတွေကိုကြည့်ရင်းလီး တောင်လာသည်…။ အတွင်းခံပါလို့သာတော်သေးသည်…။ အတွင်းခံသာမပါရင် အောင်သီဟ ရိတ်မိသွားနိုင်သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ မီးဖိုထဲဝင်သွားပြီးခဏကြာတော့…. ” အကိုတို့ခဏနော်ကျွန်တော့်မိန်းမကိုနည်းနည်းသွားကူလိုက်ဦးမယ်…” ” ရတယ်ညီလေး…သွား…သွား…အကိုတို့ကိုအားနာမနေနဲ့…” အောင်သီဟ ထထွက်သွားတော့ သန်းကြိုင် အင်္ကျီအိပ်ကပ်ထဲကစက္ကူနဲ့ထုပ်လာတဲ့အိပ်ဆေးမှုန့်ကို အောင်သီဟ သောက်မဲ့အရက်ခွက်ထဲနဲ့ ဖြိုးဖြိုးဝေ အတွက်အချိုရည်ထည့်ထားတဲ့ခွက်ထဲကိုမျှထည့်လိုက်သည်…။ ” သန်းကြိုင် အဲဒါဘာလဲ…” ” အိပ်ဆေး…” ” ဘာလုပ်ဖို့လည်း…” ” ဟိုကောင်မလေးကိုလိုးမလို့…” ” သန်းကြိုင် မင်းပြဿနာတတ်မယ်နော်…” ” မင်း…အသာနေစမ်းပါ…မသိချင်ယောင်ဆောင်နေ…ငါပြီးရင်မင်းအလှည့်လာမယ်…” ” အေးပါကွာ…” ခဏကြာတော့…အောင်သီဟ နဲ့ ဖြိုးဖြိုးဝေ တို့ပန်းကန်လေးတွေကိုင်ပြီးရောက်လာကြတယ်…။ ” ဒီကအကိုတို့လည်း ဖြိုး ရှိနေလို့အားမနာပါနဲ့နော်…လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲသောက်ကြပါ…” ” ကျေးဇူးပါညီမရယ်…ကဲရော့…ညီမအတွက်အချိုရည်ထည့်ထားတယ်…” ” ဟုတ်ကဲ့ရှင့်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…” အောင်သီဟ ရယ် သန်းကြိုင် ရယ် ထွန်းကျော် ရယ်ကတော့တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်သောက်နေ၏…။
ဒါပေမဲ့… သန်းကြိုင် နဲ့ ထွန်းကျော် ကအနည်းငယ်သာသောက်ပြီး အောင်သီဟ ကိုအမှောက်တိုက်နေကြသည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ လည်းခွက်ထဲကအချိုရည်ကိုတစ်ခါတည်းအကုန်သောက်လိုက်တော့…သန်းကြိုင် ကနောက်တစ် ခွက်ထပ်ထည့်ပေးသည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ လည်းအချိုရည်လေးသောက်လိုက်အမြည်းလေးနှိုက်စားလိုက်နဲ့ကြာလာတော့…. အိပ်ဆေးအရှိန်တက်လာပြီးအိပ်ချင်လာသည်…။ အောင်သီဟ လည်းအရက်အရှိန်နဲ့အိပ်ဆေးအရှိန်ရောပြီးစားပွဲပေါ်မှောက် သွားသည်…။ မကြာပါဘူး…ဖြိုးဖြိုးဝေ လည်းအိပ်ဆေးအရှိန်တက်လာပြီးဆိုဖာဆက်တီထိုင်ခုံပေါ်မှီရင်းအိပ်ပျော်သွား သည်…။ ” ကဲ…ထွန်းကျော် ရေ…မင်း…ဒီကောင့်ကိုခဏကြည့်ထား…ငါ…သူ့ကိုအိပ်ခန်းထဲမသွားပြီးလိုးလိုက်အုံးမယ်…” သန်းကြိုင် လည်း ဖြိုးဖြိုးဝေ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပွေ့ချီပြီးအိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားသည်…။ အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ကုတင် ပေါ်မှာပက်လက်တင်ပြီး ဖြိုးဖြိုးဝေ ဘေးကနေ၀င်အိပ်ကာဖက်ပြီး Selfie ဆွဲလိုက်သည်…။ ပြီးတော့ဖုန်းကိုကုတင်ဘေး ကစာရေးစားပွဲပေါ်တင်ပြီး ဗွီဒီယို ရိုက်ထားလိုက်သည်…။ သန်းကြိုင် ဖြိုးဖြိုးဝေ အပေါ်ယံအင်္ကျီထုပ်သီးတွေကိုဖြုတ်လိုက်သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ ရင်ဘက်ဟင်းလင်းပွင့် သွားသည်…။
အနက်ရောင်ဇာဘော်လီအောက်မှဖြူဝင်းတဲ့ရင်သားစိုင်တွေဟာဘော်လီအပြင်ဘက်လျှံထွက်နေသည်…။ သန်းကြိုင် ဖြိုးဖြိုးဝေ ကျောကုန်းအောက်ကိုလက်လျှိုကာဘော်လီချိပ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးဘော်လီကိုချွတ်ပစ် လိုက်သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ အပေါ်ပိုင်းအ၀တ်ဗလာဖြစ်သွားသည်…။ သန်းကြိုင် ဖြိုးဖြိုးဝေ ရဲ့ဖြူဝင်းတဲ့နို့အုံကို ကြည့်ပြီးသဘောကျနေသည်…။ ဖြူဝင်းသောနို့အုံအလယ်မှာမန်ကျည်းစေ့ခန့်နို့သီးခေါင်းလေးမှာနီညိုရောင်သန်းနေ သည်…။ မိမိအရမ်းလိုးချင်နေသည့်မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့နို့ကိုလက်တွေ့ကိုင်ခွင့်စို့ခွင့်ရနေလေပြီ..။ ဖြိုးဖြိုးဝေ ရဲ့ဘယ်ဘက်နို့ကိုဆုပ်နယ်ရင်းညာဘက်နို့ကိုကုန်းစို့လိုက်သည်…။ ” ပြတ်…ပြတ်….” ” အင့်…ဟင်း…” ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်မှညည်းသံသဲ့သဲ့ထွက်လာသည်…။ အိပ်ယာကနိုးသွားခြင်းတော့မဟုတ်…အိမ်မက်ယောင်ယောင်ဖြစ် နေသည်…။ သန်းကြိုင် ဖြိုးဖြိုးဝေ နို့ကိုစို့နေရင်းပါးစပ်ထဲတံတွေးများလာသည့်အတွက် ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်ကို ပါးစပ်ချင်းတေ့လိုက်တော့ ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်လေးဟလာသည်…။ သန်းကြိုင် လည်း ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်ထဲတံ တွေးများထွေးချလိုက်သည်…။ ပြီးတော့ ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်ကိုပါးစပ်ချင်းတေ့ပြီးအငမ်းမရနမ်းလေတော့သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ ဆီမှညည်းသံသဲ့သဲ့ထွက်လာပြီးတစ်ခက်တစ်ချက်ခါးလေးကော့ကော့လာသည်…။
သန်းကြိုင် လည်းပါးစပ်ခြင်းနမ်းရင်း ဖြိုးဖြိုးဝေ ရဲ့ထမိန်စကိုဆွဲဖြည်ပြီးထမိန်အောက်ကိုလက်လျှိုသွင်းလိုက်သည်…။ ပင်တီအပေါ် မှစောက်ဖုတ်နေရာကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့အရည်တွေစိုရွှဲနေသည်…။ သန်းကြိုင်း လည်းစောက်စိနေရာကို စမ်းပြီးလက်ခလယ်နဲ့ဖိပွတ်လိုက်တော့… ” အား…ကိုရယ်….အား…ယားတယ်…အ…” ဖြိုးဖြိုးဝေ အသံကြားတော့ သန်းကြိုင် စိတ်တွေပိုပြီးထလာသည်…။ ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီး ဖြိုးဖြိုးဝေ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကုတင်ပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ်ထားပြီးထမိန်နဲ့အနီရောင်ပင်တီကိုဆွဲချွတ်လိုက်သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ ခန္ဓာကိုယ် မှာအ၀တ်ဗလာဖြစ်သွားသည်…။ သန်းကြိုင် လည်းသူ့ရှေ့ကသူအရမ်းလိုးချင်နေတဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးရေဆေး ငါးကြီးကိုလိုးရတော့မှာမလို့လီးကအပြတ်ကိုမာတောင်နေသည်…။ စောက်ဖုတ်မွှေးများရှင်းထားသည့်အတွက်ကြောင့် စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကအထင်းသားတွေ့မြင်နေရသည်…။ သန်းကြိုင် လည်း ဖြိုးဖြိုးဝေ ပေါင်ကိုဆွဲ ကားကာစောက်ဖုတ်ကိုဖြဲကြည့်လိုက်တော့…စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေမှာပြဲလန်မနေသေးပဲအနည်းငယ်နီညိုရောင်း သန်းနေသည်….။ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကတော့…ဖရဲသီးစိပ်လိုရဲမှည့်နေပြီး…စောက်စိမှာပြူးထွက်နေသည်…။
သန်းကြိုင် ဖြိုးဖြိုးဝေ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုကိုင်ပြီးကုတင်အဖျားထိဖင်ရောက်လာအောင်ဆွဲလိုက်သည်…။ ပြီးတော့ ဖြိုးဖြိုးဝေ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုပေါ်ထောင်ပြီးနေရာဝင်ယူလိုက်သည်…။ ပြီးတော့သူ့လီးကြီးကို ဖြိုးဖြိုးဝေ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးမှာတေ့ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးထည့်နေသည်…။ အောင်သီဟ လီးမှာ သန်းကြိုင် လီးလောက်မတုတ်တာကတစ်ကြောင်း…အလိုးခံဖူးသည့်အရေအတွက်နည်းသည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့် ဖြိုးဖြိုးဝေ စောက်ဖုတ်မှာစီးပိုင်ကြပ်ထုပ်နေသည်….။ ” အ…အာ့…ကိုရယ်…ကို့ဟာကြီးကဒီနေ့ကြီးလိုက်တာအရမ်းပဲ…ဖြိုး…ကြိုက်တယ်…အ…အ…” ” အ့…ကိုရယ်…အရမ်းကောင်းတယ်….အ…အ…အီး…ရှီး….” သန်းကြိုင် ဖြိုးဖြိုးဝေ ကိုကြာကြာမလိုးနိုင်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်မှထွက်လာသည့်စကားကြောင့်သူ့စိတ်တွေ အရမ်းထလာပြီးခဏအတွင်းမှာ ” ပြီး…” ချင်လာသည်…။ ” အ့…အ့…ကိုရယ်…အ့…ကောင်းတယ်စောင့်…စောင့်…အ့…အီး…အိုး..ရှီး…” ” ဗြွတ်…ဗြွတ်…ဘွတ်….ဗျစ်…ဗျစ်….ဗျစ်…” ” အ့…အ့…အား…” သန်းကြိုင် လည်း ” ပြီး…” ချင်နေတဲ့စိတ်ကိုထိန်းထားတဲ့ကြားကမနေနိုင်ပဲ ဖြိုးဖြိုးဝေ စောက်ဖုတ်ထဲကို သုတ်ရည်တွေဒလဟောပန်းထည့်လိုက်သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ လည်းပူနွေးနွေးခံစားရပြီးငြိမ်ကျသွားသည်…။
သန်းကြိုင် လီးမှာတစ်ချီ ” ပြီး…” သော်လည်းပျော့ခွေမသွားသေးပဲမာတောင်နေသည်…။ နောက်တစ်ချီထပ်ဆွဲဖို့ ဖြိုးဖြိုးဝေ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုကုတင်ပေါ်မှောက်လျှက်ထားပြီးဗိုက်အောက်ကိုခေါင်းအုံးတွေခုလိုက်သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ ပုံစံမှာကုတင်ပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းရှိပြီးခြေထောက်နှစ်ချောင်းမှာအောက်ကိုတွဲလောင်းကျနေသည့် အတွက်ကုန်းနေသလိုဖြစ်နေသည်…။ သန်းကြိုင် လည်း ဖြိုးဖြိုးဝေ ပေါင်နှစ်ဖက်ဖြဲကားပြီးနောက်ကိုပြူ ထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ကာလိုးလိုက်ပြန်သည်…။ ခဏကြာတော့ ထွန်းကျော် အိပ်ခန်းထဲဝင်လာပြီး… ” ဟှောင့်…သန်းကြိုင်…မပြီးသေးဘူးလား…” ” တစ်ချီပြီးပြီဟ….ဒါဒုတိယအချီ…ဒါပြီးမင်းလိုးရမှာပါကွ…” သန်းကြိုင် နဲ့ ထွန်းကျော် တို့နှစ်ယောက် ဖြိုးဖြိုးဝေ ကိုတစ်ယောက်နှစ်ချီဆီလိုးအပြီးနောက်နေ့တွေလည်းဖန် လို့ရအောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး ဖြိုးဖြိုးဝေ ကိုအ၀တ်အစားတွေပြန်ဝတ်ပေးပြီးဧည့်ခန်းထဲကဆိုဖာဆက်တီခုံ ပေါ်မှာပုံမပျက်ပြန်ထားပြီးအိမ်ပြန်သွားကြတယ်…။ မနက် ၇ နာရီထိုးလောက်မှာ ဖြိုးဖြိုးဝေ နိုးလာသည်…။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းစားပွဲပေါ် မှောက်အိပ်နေသည်…။ ညကအကြောင်းတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘာမှစဉ်းစားမရ…။
ညကအိမ်မက်မက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခု သာမျက်စိထဲပြန်မြင်ယောင်နေမိတယ်…။ ညကအိမ်မက်ထဲမှာသူမကိုလိုးပေးနေတာ ” ကို ” မဟုတ်ပဲ ကိုသန်းကြိုင် ကြီး ပါလားဆိုပြီးရှက်ပြုံးပြုံးမိလေရဲ့….။ အိမ်မက်မဟုတ်သောလက်တွေ့ဘ၀ ဖြိုးဖြိုးဝေ ကျောင်းဆင်းတော့အိမ်ကို ၃:၃၀ လောက်ပြန်ရောက်လာတယ်…။ အခန်းတံခါးသော့ဖွင့်နေတုန်းသူမပြန်အလာ ကိုစောင့်နေတဲ့ သန်းကြိုင် လည်းသူ့အခန်းထဲကထွက်လာတယ်…။ ” မင်္ဂလာပါဆရာမလေး…” ” ဟုတ်ကဲ့…မင်္ဂလာပါရှင့်…မနေ့ညကအကိုတို့ပြန်သွားတာတောင်…ဖြိုး…မသိလိုက်ဘူးအဲဒီအတွက်…ဖြိုး…တောင်းပန် ပါတယ်နော်…” ” ရပါတယ်…အော်..ဒါနဲ့…ညီမ..ဒီကောင်မလေးကိုသိလား…” ဆိုပြီး သန်းကြိုင် ဖုန်းထဲကပုံကိုပြလိုက်သည်…။ ပုံမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကုတင်စောင်းတွင်ကျောမှီ ထားပြီးအ၀တ်ဗလာဖြင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်လီးကိုပါးစပ်ထဲထည့်ထားသည်…။ သန်းကြိုင် ကလည်းတစ် ပုံပြီးတစ်ပုံပြလာတော့မှထိုမိန်းကလေးမှာမိမိဖြစ်နေမှန်းသိရပြီး ဖြိုးဖြိုးဝေ ခေါင်းတစ်ခုလုံးချာချာလည်သွားသည်…။ မနေ့ညကအိမ်မက်လို့ထင်ထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကအမှန်တကယ်ဖြစ်နေသည်…။ နောက်ပြီးတော့ သန်းကြိုင် တစ်ယောက်တည်းမဟုတ် ထွန်းကျော် လိုးတာပါခံလိုက်ရသေးသည်…။
ဒီပုံနဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုလိုင်းပေါ်တင်ရမလားလို့…” ” မ…မလုပ်ပါနဲ့ရှင်…ဖျက်ပေးပါနော်…ဖြိုး…တောင်းပန်ပါတယ်….” ” ဖျက်ပေးစေချင်ရင်…အကို့ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်စည်းပေးရမယ်…” ” ရှင်…” ” ဘယ်လိုလဲ…သဘောတူလား…” ” မလုပ်ပါနဲ့အကိုရယ်…ဖြိုး….ကို့…အပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ပါရစေနဲ့…” ” ကြာပါတယ်…အခုပဲလိုင်းပေါ်တင်လိုက်တော့မယ်…” ” မ…မတင်ပါနဲ့…ဖြိုး…လက်ခံပါတယ်…” ” Ok ဒါဆိုတံခါးဖွင့်လိုက်ဧည့်ခန်းထဲမှာပဲလိုးမယ်…” ပုံနဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုလိုင်းပေါ်တော့ ဖြိုးဖြိုးဝေ အနေနဲ့မတင်စေလို…။ ပုံနဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင်သာ အောင်သီဟ တွေ့သွားရင် ဖြိုးဖြိုးဝေ ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်…။ နောက်ပြီးနှစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်းလည်းအရှက်ရမှာကို ဖြိုးဖြိုးဝေ မလိုလားသော ကြောင့် သန်းကြိုင် ကိုလက်ခံလိုက်သည်…။ စိတ်ထဲမှာတော့ သန်းကြိုင် ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်နေသည်။ သန်းကြိုင် သည် ဖြိုးဖြိုးဝေ ကိုဖက်ထားပြီးမျက်ရည်စိုနေတဲ့ပါးလေးကိုပွတ်သပ်ကာနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကိုလျှာ ဖျားနဲ့ကလိလိုက်သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်နေသည်…။ သန်းကြိုင် ပြုသမျှနုရတော့မည်…။ ” ဖတ်…” ” ကောင်မဘာလုပ်နေတာလဲ…ငါ့ကိုပြန်နမ်းလေ…” သန်းကြိုင် ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးကိုဖတ်ခနဲရိုက်ပြီးသူ့ပါးစပ်ကိုပြန်နမ်းခိုင်းသည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ နှုတ်ခမ်းအစုံမပွင့်တပွင့် လေးဟလာတော့…သန်းကြိုင် အငမ်းမရနမ်းလေတော့သည်…။
” အွင်း….အွင်း….အွင့်….” ဖြိုးဖြိုးဝေ သန်းကြိုင် ကိုတင်းတင်းဖက်ထားသည်…။ အသိစိတ်က သန်းကြိုင် ကိုမုန်းနေပေမဲ့မသိ စိတ်ထဲမှာတော့ကျေနပ်သလိုလိုဖြစ်လာပြီး…သန်းကြိုင် ကိုပြန်နမ်းမိလေသည်…။ သန်းကြိုင် လည်း ဖြိုးဖြိုးဝေ ရဲ့အဖြူရောင်ရင်ဖုံးအင်္ကျီကိုစောင့်ဆွဲလိုက်တော့…နှိပ်စိတွေပြုတ်ပြီးရင်ဘက်ဟောင်းလောင်းပွင့်သွားသည်.။ သန်းကြိုင် လည်းအသားရောင်ဘော်လီအင်္ကျီအောက်ကနေလက်နဲ့နှိုက်ကာ ဖြိုးဖြိုးဝေ ရဲ့စူဖြိုးမို့မောက်နေ တဲ့ဘယ်ဘက်နို့အုံကိုနှိပ်ချေနေသည်…။ ” အွင်း…အွင်း…အွင်း…” ဖြိုးဖြိုးဝေ တစ်ယောက် သန်းကြိုင် ရဲ့ကာမကွန်ယက်မှာမရုန်းနိုင်အောင်ပိတ်မိနေသည်…။ စောက်ဖုတ်တစ်ခု လုံးအရည်တွေစိမ့်ထွက်ကာစိုရွှဲနေပြီးယားကျိကျိဖြစ်နေသည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ အလိုးခံချင်နေပြီဆိုတာ သန်းကြိုင် သိသည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ မျက်နှာမှာကာမသွေးနိုးကြွလာပြီးနီရဲနေသည်…။ သန်းကြိုင် လည်းပို၍သေချာအောင် ဖြိုးဖြိုးဝေ ဝေထမိန်အစိမ်းကိုချွတ်ပြီးပင်တီကိုစမ်းကြည့်တော့အရည်တွေစိုရွှဲနေသည်…။ ” ကောင်မအလိုးခံချင်နေပြီမလား…” “…….” ဖြိုးဖြိုးဝေ ပြန်မဖြေ….အဖြေပေးရမှာလည်းပါးစပ်ကပြောမထွက်…။ ” မမေးပဲကျမကိုတက်လိုးလိုက်ပါတော့လား…” လို့စိတ်ထဲမှပြောနေမိတယ်…။ ” ဖြောင်း…” ” အား…” ” ကောင်မ…ငါမေးနေတာမဖြေဘူး…အလိုးခံချင်ပြီလား…” ” ဟုတ်…” ” ဖြောင်း…” ” အ့….” ” ဘာဟုတ်လည်း…ကျမကိုလိုးပေးပါတော့လို့ပြော…” ။
” ဟုတ်…ကျမကိုလိုးပေးပါတော့…ကျမအရမ်းခံချင်နေပြီ…” ဖြိုးဖြိုးဝေ အသားအနာမခံလိုတော့၍မပြောဝံ့ပေမဲ့အရဲစွန့်ကာပြောလိုက်သည်…။ ” ကောင်မ…တော်တော်ရွနေ…လာ..ငါ့လီးကိုအရင်စုပ်ပေး…ငါ့လီးတောင်လာမှလိုးပေးမယ်…” ဖြိုးဖြိုးဝေ စိတ်ညစ်သွားသည်…။ တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းနေသည်…။ ကို နဲ့လိုးတုန်းကတောင် ကိုလီးကို စုပ်မပေးခဲ့ဘူး…။ အခုလိုသူစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လီးကိုမဖြစ်မနေစုပ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတော့ရှက်နေမိသည်…။ ” ကောင်မ…ဘာလဲအသားနာချင်တာလား…ငါ…ပါးကိုဖြတ်ရိုက်လိုက်ရ….” ဖြိုးဖြိုးဝေ ကြောက်ကြောက်နဲ့ သန်းကြိုင် ရှေ့တွင်ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်…။ သန်းကြိုင် ပုဆိုး ကိုချွတ်ချလိုက်တော့…ထောင်မတ်နေတဲ့လီးကြီးကဘွားခနဲပေါ်လာသည်…။ လီးကြီးမှာတုတ်တုတ်ရှည်ရှည်နဲ့မဲပြောင် ကာအကြောဖြိုင်းဖြိုင်းထနေသည်…။ မကြာခင်အချိန်မှာဒီလီးကြီးနဲ့အလိုးခံရတော့မယ်လို့တွေးရင်းရင်ထဲလှိုက်ဖိုလာ သည်…။ သန်းကြိုင် သူ့လီးကြီးကိုကိုင်ပြီး ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်တွင်လာတေ့သည်…။ ” ကောင်မ…ဘာစဉ်းစားနေတာလဲ…ငါ့လီးကိုစုပ်ပေးစမ်း…” ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်ဟလေးလိုက်တော့ သန်းကြိုင် သူ့လီးကြီးကိုကိုင်ပြီးထိုးထည့်သည်…။
ပါးစပ်ထဲလီးတစ်ဝက် လောက်ဝင်လာတော့ ဖြိုးဖြိုးဝေ ခေါင်းကဆံအုပ်ကိုဖြုတ်ပြီးဆံပင်တွေကိုအပေါ်စုစည်းကာစောက်ဖုတ်ကိုလိုးသလိုပါးစပ် ကိုလိုးနေသည်…။ ” အွင့်…အွင့်…အွင့်…”” အိုး…ကောင်းလိုက်တာကွာ…ကောင်မ…လီးစုပ်ပေးတာကျွမ်းသားပဲ…” အချိန်အတော်ကြာအောင်လီးစုပ်ခိုင်းပြီးနောက် သန်းကြိုင် က ဖြိုးဖြိုးဝေ ကိုဆိုဖာဆက်တီထိုင်ခုံပေါ်တွင်ဒူး ထောက်ကုန်းခိုင်းသည်…။ ” ကောင်မ…ကုန်းပေးစမ်း…” ဖြိုးဖြိုးဝေ သန်းကြိုင် ပြောသလိုကုန်းပေးလိုက်သည်…။ ကားကိုကော့ကာကုန်းပေးရသည့်အတွက်စောက်ဖုတ် မှာပြူးထွက်နေသည်…။ သန်းကြိုင် လည်းဘယ်ဘက်လက်ကို ဖြိုးဖြိုးဝေ ခါးကိုကိုင်ပြီးညာဘက်လက်နဲ့သူ့လီး ကြီးကိုဆုပ်ကိုင်ကာစောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ပြီးလီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်သည်အထိဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးသွင်းလိုက်သည်…။ တုတ်တုတ်ရှည်ရှည်လီးကြီးနဲ့အထိုးခံရလို့ ဖြိုးဖြိုးဝေ ညည်းသံသဲ့သဲ့ထွက်လာသည်…။ ” ဗြစ်…ဗြစ်…ဗြစ်….ဗြွတ်…” ” အ့…အမေ့…အ့…အ့…အား…” ” ကောင်မဘယ်လိုနေလဲ…ကြိုက်လား…” ” ကြိုက်တယ်…”ကလင်…လင်…လင်….စားပွဲပေါ်မှဖုန်းဝင်လာသည်…။ သန်းကြိုင် လည်းဘယ့်သူ့ဆီကဖုန်းလည်းဆိုတာကြည့်လိုက်တော့ အောင်သီဟ ဆီကဖုန်းဖြစ်နေသည်…။
” ကောင်မ…နင့်ယောက်ျားဆီကဖုန်းလာတယ်ကိုင်လိုက်…” ဖြိုးဖြိုးဝေ ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်သည်နှင့် သန်းကြိုင် နောက်ကနေအသာလိုးနေသည်…။ ” ဟလို…” ” ဖြိုး…အိမ်ပြန်ရောက်ပြီလား…” ” ဟုတ်…ရောက်ပြီ…ကို…” ” ကို…အခုအလုပ်ကိစ္စနဲ့နယ်ဘက်သွားနေတာ…ညအိမ်ပြန်မအိပ်ဖြစ်ဘူး…ဖြိုး…တစ်ယောက်တည်းအိပ်ရဲလား…” ” ဖြိုး…အိပ်ရဲပါတယ်…အ့…” ” ဖြိုး…မကြောက်နဲ့နော်…ကို….ကိုသန်းကြိုင် တို့ ကိုထွန်းကျော် တို့ဆီကဖုန်းဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါ့မယ်…” ” အင်း..ပါ…ကို…ဒါဆို…ဖြိုး…ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်…အွင့်…” ” ဖြိုး…ဘာဖြစ်နေတာလဲ…ဖျားနေတာလား…” ” ဖြိုး…မဖျားပါဘူး…ဒီနေ့…အ…ပင်ပန်းနေလို့…အ့…ဒါဆိုဒါပဲနော်…” ” Ok…ဖြိုး…ဖြိုး…ကို…အရမ်းချစ်တယ်…” ဖြိုးဖြိုးဝေ မှာယောက်ျားနဲ့ဖုန်းပြောရင်းအလိုးခံရသည်မို့တအင့်အင့်ဖြစ်နေသည်…။ ဖုန်းပြောရင်း သန်းကြိုင် လိုးတဲ့ဆီအာရုံရောက်နေပေမဲ့ယောက်ျားသိမှာကြောက်၍ကြိတ်ခံနေရသည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ ဖုန်းချသွားတော့ သန်းကြိုင် လည်း ဖြိုးဖြိုးဝေ ကိုနွားသိုးကြိုးပျက်လိုးပါတော့သည်…။ ” အား…အား..အီး….ရှီး…” ” ကောင်မ…ကောင်းလား…” ” အား…အရမ်းကောင်းတယ်…အာ…အား…” ကလင်…လင်…လင်… ” ဟလို…” ” ကိုသန်းကြိုင် ကျွန်တော် အောင်သီဟ ပါ…” ” အေး…ညီလေးပြော…” ” ကျွန်တော်အခုအလုပ်ကိစ္စရှိလို့နယ်ဘက်သွားနေတာ…ဒီညပြန်မလာဖြစ်လို့အိမ်ကိုဂရုစိုက်ပေးပါဦး…”။
” အေးအေး..ညီလေး…အကိုဂရုစိုက်လိုက်ပါ့မယ်…” ” ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ…ပြန်လာမှဘီယာတိုက်မယ်…” ” ရပါတယ်ညီလေးရာ…” ” ဒါနဲ့ခင်ဗျားအခုဘာလုပ်နေတာလဲဗျ…ခုနမိန်းကလေးတစ်ယောက်အသံကြားမိသလားလို့…” ” ဟုတ်တယ်..ညီလေးရာ…ဒီနေ့စိတ်ထနေလို့ဖားသည်မတစ်ယောက်ခေါ်ပြီးဆွဲနေတာ…” ” ဟား…ဟား…ခင်ဗျားကတော့လုပ်ပြီ….” ” ဘာလဲမယုံဘူးလား…မယုံရင်အသံနားထောင်ကြည့်….” ဆိုပြီးဖုန်းကို ဖြိုးဖြိုးဝေ မျက်နှာနားကပ်ပေးလိုက်သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ လန့်သွားသည်…။ အသံမထွက်အောင်ပါးစပ်ပိတ် ထားပေမဲ့…သန်းကြိုင် စောင့်ချက်ကပြင်းတော့ညည်းသံသဲ့သဲ့ထွက်လာသည်….။” အွင့်….အွင့်…” ” ကောင်မ…ပြောစမ်း…ငါလိုးတာကြိုက်လား…” ” …….. ” ဖြိုးဖြိုးဝေ ပြန်မဖြေ…တော့နားနားကပ်ပြီးတိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်…။ ” ကောင်မ…မင်းယောက်ျားမသိစေချင်ရင်ငါမေးတာဖြေ…” ” အား…ကောင်းတယ်…အား…အီး…ရှီး…” ” ကောင်မ…ငါ့လီးကိုကြိုက်လား…” ” အား…ကြိုက်တယ်…အ့…အရမ်းကြိုက်တယ်…” ဖြိုးဖြိုးဝေ ယောက်ျားဖြစ်သူမသိအောင် သန်းကြိုင် မေးသမျှကိုအသံပြောင်းကာဖြေပေးလိုက်သည်…။
” ရပါပြီဗျာ…ကဲ…ကိုသန်းကြိုင်…ကျွန်တော်စိတ်ချမယ်နော်…ကိုထွန်းကျော် ကိုလည်းပြောလိုက်ပါဦး….” ” Ok…ညီလေး…” ခဏကြာတော့…သန်းကြိုင် စောင့်ချက်တွေကမြန်ဆန်ပြီးပြင်းထန်လာသည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ လည်းကောင်းလွန်း ၍ခေါင်းကိုဘယ်ညာယမ်းနေရသည်…။ ” အင်း…အင်း…အင်း…အား…ရှီး…ငါလိုးမစောက်ဖုတ်လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ…ကြပ်နေတာပဲ…” အား…အမေ့…အား…အီး…ရှီး….” သန်းကြိုင် လီးထိပ်မှသုတ်ရည်များဒလဟောပန်းထွက်လာပြီး ဖြိုးဖြိုးဝေ စောက်ဖုတ်ထဲစီးဝင်သွားသည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ လည်းပူခနဲခံစားရပြီးတစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့အကြောတွေနိုးကြွလာပြီးမောပန်းနွမ်းနယ်နေသည်…။ သန်းကြိုင် လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ဖြိုးဖြိုးဝေ စောက်ဖုတ်ထဲမှသုတ်ရည်များလျှံထွက်လာသည်….။ နှစ်ယောက်သား ခဏနားပြီးနောက်… ” ဟလို…” ” ဟှောင့်…ထွန်းကျော်…မင်းအခုဘယ်မှာလဲ…” ” အိမ်မှာ…ဘာလို့လဲ…” ” မင်း…အခုဘာလုပ်နေလဲ…” ” အိမ်စောင့်နေတာ…မိန်းမကရွာမှာရှိတဲ့သူ့ဒေါ်ကြီးနေမကောင်းလို့ကလေးတွေပါခေါ်ပြီးရွာပြန်သွားတယ်…ဒါနဲ့.. မင်းကအခုဘယ်မှာလဲ…” ” မနေ့ညကမဟေသီလေးအိမ်မှာ…” ” ဘာလုပ်နေတာလဲ…” ” မဟေသီလေးကိုလိုးနေတာ…” ” တကယ်ကြီးလား…” ။
” တကယ်ပေါ့ကွ…အခုတောင်တစ်ချီပြီးသွားပြီ…ဟဲ…ဟဲ…” ” ဟှောင့်…မင်း…ပြဿနာတက်မယ်နော်..သူ့ယောက်ျားပြန်လာတော့မှာ…” ” သူ့ယောက်ျား…ဒီနေ့ပြန်မလာဘူးကွ…အဲဒါကြောင့်မင်းကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တာ…သူ့အခန်းလာခဲ့လိုက်…” ” အေး…အေး…အခုလာပြီ…” ” ကိုသန်းကြိုင်…ရှင်ဘာလို့…ကိုထွန်းကျော် ကိုခေါ်လိုက်တာလဲ…” ” ကောင်မ…မင်းကိုလိုးခိုင်းမလို့ခေါ်လိုက်တာ…မင်းမကြားဘူးလား…လာစမ်း…ငါ့လီးကိုပြန်စုပ်ပေးဦး…” ဖြိုးဖြိုးဝေ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ဆိုဖာဆက်တီခုံပေါ်မှာပေါင်ကားထိုင်နေတဲ့ သန်းကြိုင် ပေါင်ကြားဝင် ထိုင်ကာလီးစုပ်ပေးလိုက်သည်…။” အား…ကောင်းလိုက်တာကွာ…စုပ်…စုပ်…လျှာနဲ့လည်းလျှက်ပေးဦး…” ” ကျီ….ဂျောက်…” ဖြိုးဖြိုးဝေ သန်းကြိုင် လီးကိုစုပ်ပေးနေတုန်း ထွန်းကျော် ရောက်လာသည်….။ ” ဟာ…သန်းကြိုင်…ပိုင်လှချီလား…” ” အေးကွာ…ပိုက်ဆံပေးလိုးရတဲ့ဖာသည်မတောင်သူလောက်ခိုင်းမရဘူး…မင်းလည်းငါ့ကိုဘီယာတိုက်ရမှာနော်…” ” တိုက်ရမှာပေါ့ကွ…ဟဲ…ဟဲ…” ” ကောင်မ…ထစမ်း…ဒီပေါ်မှာခေါင်းအုံးပြီးပက်လက်လန်ပေးစမ်း…” ဖြိုးဖြိုးဝေ သန်းကြိုင် ပြောသလိုဆိုဖာဆက်တီခုံရဲ့လက်တန်းပေါ်တွင်ခေါင်းမှီကာပက်လက်လှန်ပြီးဒူးထောင် ပေါင်ကားပေးလိုက်သည်…။ သန်းကြိုင် ဖြိုးဖြိုးဝေ ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီးစောက်ဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းကိုသူ့လီး ကြီးဖြင့်ပွတ်သပ်နေသည်…။
ထွန်းကျော် လည်းအ၀တ်အားတွေချွတ်ပြီး ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်ထဲကိုသူ့လီးကြီးထိုးထည့်လိုက် သည်…။ ပါးစပ်ထဲလီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားသည်နှင့် ဖြိုးဖြိုးဝေ ပါးစပ်ကိုစောက်ဖုတ်လိုးသလိုလိုးလေတော့သည်…။ ဖြိုးဖြိုးဝေ သည်တစ်ချိန်တည်းမှာစောက်ဖုတ်ရောပါးစပ်ပါအလိုးခံနေရသည်…။ ” အွင့်…အွင့်….အွင်း…ပြွတ်….ပြွတ်…” ” ကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်ကွာ…စီးပိုင်နေတာပဲ…ဟဲ…ဟဲ…ဟဲ…” ” ပါးစပ်ကလည်းကောင်းပါတယ်ကွ…ဒီကောင်မပါးစပ်ပေါက်နဲ့ငါ့လီးနဲ့ကွက်တိပဲ…ဟား…ဟား…” ဖြိုးဖြိုးဝေ မှာသောကြာနေ့ညနေကျောင်းဆင်းလို့တိုက်ခန်းပြန်ရောက်ကတည်းကအလိုးခံနေရတာစနေနေ့မနက် ၁၀:၀၀ နာရီလောက်မှ သန်းကြိုင် နဲ့ ထွန်းကျော် တို့ပြန်သွားကြသည်…။ သန်းကြိုင် နဲ့ ထွန်းကျော် တို့နှစ် ယောက် ဖြိုးဖြိုးဝေ ကိုနေရာအမျိုးမျိုးမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လိုးထားသောကြောင့် ဖြိုးဖြိုးဝေ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်…။ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေစပ်ပူစပ်လောင်ဖြစ်နေရုံသာမကဖင်ပါအလိုးခံထားရသည်…။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖင်လိုး ခံရသည်မို့ဖင်ပေါက်ထဲမှအောင့်သလိုလိုခံစားနေရသေးသည်…။ ကို ပြန်လာရင်သိသွားမှာကြောက်လို့တစ်ခန်းလုံးသန့် ရှင်းရေးလုပ်ပြီးမှရေချိုးလိုက်သည်… အားလုံးပြီးသွားတော့ကုတင်ပေါ်တွင်အိပ်ပျော်သွားသည်……… ပြီးပါ